ကျောင်းသားသမဂ္ဂများက အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ဆန္ဒပြမှုများနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကျောင်းသား၊ ပြည်သူများအား လိုက်လံစည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ် သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ်အတွင်း အုပ်စုဖွဲ့ကာ ဒုစရိုက်မှုများ ကျူးလွန်နေသည့် လူမိုက်အဖွဲ့များကို ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ၁၁ ဦး ဖမ်းဆီးရမိ နိုင်ငံရေးကို အခြေအနေအချိန်အခါပေါ် မူတည်ပြီး လုပ်သင့်၊ မလုပ်သင့် ဆုံးဖြတ်ရမည်ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ပြောကြား ဆောင်းရာသီ ဂီတဆုပေးပွဲနှင့် တစ်နှစ်တာဂီတဆုပေးပွဲကို နှစ်ပွဲပေါင်းပြုလုပ်မည် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ တရားမ၀င် မြန်မာအလုပ်သမားများအား တရားဝင်အထောက်အထားများ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ခြောက်လထပ်မံ အချိန်တိုးမြှင့်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံစာ မလေးရှားပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးထံ ပေးပို့ထားသော်လည်း တုံ့ပြန်မှုမရှိသေး သီလ၀ါစီမံကိန်းကြောင့် ဒေသခံများ ထိခိုက်နစ်နာရမှုအပေါ် ဂျပန်ပြည်သူများသိရှိရန် JICA လမ်းညွှန်ချက်များကို စစ်ဆေးသူ၏ အစီရင်ခံစာအား လက်မခံနိုင်ကြောင်း ကန့်ကွက်လွှာ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ ပေးပို့မည် ပလက်ဖောင်း မရှိ၊ ကားပါကင် မရှိ၊ အဆင့်မီလမ်းစနစ်တွေ မရှိနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့ ယာဉ်ကြောကျပ်မှုပြဿနာ အခြေအနေဆိုးလာမလား . . . မှန်ကန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုအတွက် မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ဖြစ်နေပြီလား . . . ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းတွင် ဂျပန်ပါဝင်လာမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် အီတာလျံ-ထိုင်းကုမ္ပဏီနှင့် စုပေါင်းကုမ္ပဏီအဖွဲ့က စီမံကိန်းစတင်နိုင်မည့် အသေးစားလုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ကိုင်မည် ဦးမြ ငါးစင်ကူးတို့ဆိပ်ကို တပ်မတော်ပိုင် MEC ကုမ္ပဏီမှ ကာရံပိတ်ဆို့ထားမှုအား ကျောင်းသားနှင့် မိဘ ၃၀၀ ခန့်မှ အလုံမြို့နယ်၌ နိုဝင်ဘာ၂၅ ရက်တွင် လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမည် Previous
လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို ပထမအဆင့်လုပ်ဆောင်၍ ရလာသည့်အချက်များအပေါ် အခြားခေါင်းဆောင်များပါဝင်သော ကျယ်ပြန့်သည့်ဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်ဟု သုံးသပ်မှုများရှိနေ မှန်ကန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုအတွက် မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ဖြစ်နေပြီလား . . . ပလက်ဖောင်း မရှိ၊ ကားပါကင် မရှိ၊ အဆင့်မီလမ်းစနစ်တွေ မရှိနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့ ယာဉ်ကြောကျပ်မှုပြဿနာ အခြေအနေဆိုးလာမလား . . . အရက်နှင့်ဝိုင် တင်သွင်းခွင့်ကို ခွင့်ပြုပေးမည်ဆိုသော်လည်း နှောင့်နှေးမှုများရှိနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ လက်လီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ပြောကြား မလေးရှားနိုင်ငံရှိ တရားမ၀င် မြန်မာအလုပ်သမားများအား တရားဝင်အထောက်အထားများ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ခြောက်လထပ်မံ အချိန်တိုးမြှင့်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံစာ မလေးရှားပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးထံ ပေးပို့ထားသော်လည်း တုံ့ပြန်မှုမရှိသေး ဗီဒီယိုသတင်း
ကျောင်းသားသမဂ္ဂများက အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ဆန္ဒပြမှုများနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကျောင်းသား၊ ပြည်သူများအား လိုက်လံစည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ် နိုင်ငံရေးကို အခြေအနေအချိန်အခါပေါ် မူတည်ပြီး လုပ်သင့်၊ မလုပ်သင့် ဆုံးဖြတ်ရမည်ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ပြောကြား မှန်ကန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုအတွက် မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ဖြစ်နေပြီလား . . . လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို ပထမအဆင့်လုပ်ဆောင်၍ ရလာသည့်အချက်များအပေါ် အခြားခေါင်းဆောင်များပါဝင်သော ကျယ်ပြန့်သည့်ဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်ဟု သုံးသပ်မှုများရှိနေ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူရာတွင် ဧည့်နိုင်ငံသားများ၊ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူများနှင့် ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများပါ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ပြုရန် ဥပဒေကြမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားခြင်းကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကန့်ကွက်မည် ပြည်တွင်းသတင်းများ
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ တရားမ၀င် မြန်မာအလုပ်သမားများအား တရားဝင်အထောက်အထားများ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ခြောက်လထပ်မံ အချိန်တိုးမြှင့်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံစာ မလေးရှားပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးထံ ပေးပို့ထားသော်လည်း တုံ့ပြန်မှုမရှိသေး နောက်ဆုံးပေါ် ကင်ဆာရောဂါရှာဖွေရေးစက်များကို ကင်ဆာရောဂါကု ဌာနကြီးလေးခုတွင် တိုးချဲ့တပ်ဆင်မည် အာဆီယံပတ်လမ်းအတွင်း ပါဝင်သည့် မလွှဲတောင်-ကော့သောင်း ပြည်ထောင်စုလမ်းပိုင်းမှ မိုင် ၃၈၀ ကျော်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လကုန်အပြီး ကတ္တရာခင်းမည် ဦးမြ ငါးစင်ကူးတို့ဆိပ်ကို တပ်မတော်ပိုင် MEC ကုမ္ပဏီမှ ကာရံပိတ်ဆို့ထားမှုအား ကျောင်းသားနှင့် မိဘ ၃၀၀ ခန့်မှ အလုံမြို့နယ်၌ နိုဝင်ဘာ၂၅ ရက်တွင် လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမည် အနုပညာသတင်းများ
သီလ၀ါစီမံကိန်းကြောင့် ဒေသခံများ ထိခိုက်နစ်နာရမှုအပေါ် ဂျပန်ပြည်သူများသိရှိရန် JICA လမ်းညွှန်ချက်များကို စစ်ဆေးသူ၏ အစီရင်ခံစာအား လက်မခံနိုင်ကြောင်း ကန့်ကွက်လွှာ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ ပေးပို့မည် အရက်နှင့်ဝိုင် တင်သွင်းခွင့်ကို ခွင့်ပြုပေးမည်ဆိုသော်လည်း နှောင့်နှေးမှုများရှိနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ လက်လီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ပြောကြား ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းတွင် ဂျပန်ပါဝင်လာမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် အီတာလျံ-ထိုင်းကုမ္ပဏီနှင့် စုပေါင်းကုမ္ပဏီအဖွဲ့က စီမံကိန်းစတင်နိုင်မည့် အသေးစားလုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ကိုင်မည် ဗဟိုဘဏ်က သွင်းကုန်မူဝါဒကို စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ နိုင်ငံခြားငွေရောင်းဝယ်မှုကို သတ်မှတ်ဘောင်အတွင်းမှသာ ရောင်းဝယ်ရန် ညွှန်ကြား အမှတ် (၃၃) ကျောက်ဆည်ဘိလပ်မြေစက်ရုံကို မြန်မာနိုင်ငံမှ Myint Investment Group နှင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်း၍ BOT စနစ်ဖြင့် တစ်ရက်လျှင် တန် ၅၀၀၀ ကျ စက်ရုံအဖြစ် လုပ်ကိုင်မည် ရန်ကုန်သတင်းများ
သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ်အတွင်း အုပ်စုဖွဲ့ကာ ဒုစရိုက်မှုများ ကျူးလွန်နေသည့် လူမိုက်အဖွဲ့များကို ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ၁၁ ဦး ဖမ်းဆီးရမိ ပလက်ဖောင်း မရှိ၊ ကားပါကင် မရှိ၊ အဆင့်မီလမ်းစနစ်တွေ မရှိနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့ ယာဉ်ကြောကျပ်မှုပြဿနာ အခြေအနေဆိုးလာမလား . . . မြေဈေးနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ရန် ၀ယ်ယူထားပြီး အသုံးမပြုမြေများကို လအလိုက် အခွန်တိုးမြှင့် ကောက်ခံခြင်းနှင့် ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်သည့် မြေအရင်းအမြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရန် စီစဉ်နေ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ငါးထပ်တိုးချဲ့ဆောင်သစ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဧပြီတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး ပင်မဆောင်အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိ လူနာများအား ပြောင်းရွှေ့မည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ကန်ထရိုက်တိုက်များအား ဒဏ်ကြေးဖြင့်ခွင့်ပြုခြင်းကို လျှော့ချ၍ ပြန်လည်ဖြိုဖျက်ခြင်း ပိုမိုပြုလုပ်မည် နိုင်ငံတကာသတင်းများ
နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ထုတ် Weekly Eleven News Journal မျက်နှာဖုံး